Qaar Kamid ah Wasiiradii uu Dhowaan Magacaabay Madaxweyne Gaas oo la Dhaariyey – Radio Daljir
Qaar Kamid ah Wasiiradii uu Dhowaan Magacaabay Madaxweyne Gaas oo la Dhaariyey
Juunyo 7, 2017 8:35 b 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobjoog ka haa saaka 07 June 2017 munaasimad lagu dhaarinayey qaar kamida Wasiiradda cusub ee uu dhowaan magcaabay, munaasimada dhaarinta ayaa ka dhacday Qasriga Madaxtooyada Garoowe.
Munaasimada dhaarinta Wasiiradda ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinaayey Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Yuusuf Xaaji Nuur iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda Dawladda Puntland.
‘’ Waad dharateen oo kitaab ayaad marten, waxaadna u dhaarateen inaad dadka iyo dalkaba si daacad nimo ah ugu shaqaysaan, maanta waa maalin ka duwan maalmaha kale waayo idinkoo sooman ayaad Kitaab marteen, waxaa laydin ka rabaa dhartaa inaad ka soo baxdaan, waxaan filayaa dhammaanteen dhalin yaraatihiin marka laga reebo Wasiir Barkhadle, waxaan rabnaa in dhalinyaradu dalka u shaqeeyaan oo wixii ay soo barteen dalka ugu shaqeeyaan’’. Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
‘’waxaa ladin ka rabaa idinkoo dhalin yaro ah inaad masuulid weyn isa saartaan, waxaad noqon doontaan kuwo sifiican u shaqeeya oo si daacad ah dalka ugu adeega ayaad noqon doontaan, mustaqbal kan kasii wanaagsana waad sii yeelan kartaan ama waad fashilmi doontaan oo waxaa laydin ku baran doonaa niman waxma tarayaala inaad tihiin, doorashadu idinka ayay idin jirtaa’’ ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
‘’Dawladda nimada iyo wasiir nimadu maha qofku in xafiis keliya ka shaqeeyo waxaa la rabaa inaad siyaasada dawladda ka shaqaysaan, barnaamijka iyo hadafka siyaasadeed ee dawladda inaad fulisaan baa laydin ka rabaa qof walbi dhul iyo degaan buu ka soo jeedaa waxaadna kamid noqon doontaan metelayaasha dawladda, waxaa laydin ka rabaa shaqadiina inaad sifiican u gudataan, xilkiina la wareegtaan, hawl gashaan, hore u socotaan Insha Allah hadii Illahay yidhaahdo’’ ayuu yidhi Madaxweynaha Dawladda Puntland .
Falanqayn Ku Saabsan Xiisadaha Siyaasadeed ee Bariga Dhexe (dhegayso)